Iincwadi eziphambili zika-Isabel Allende, uluhlu olukhethiweyo | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezigqwesileyo nguIsabel Allende
Caphula ngo Isabel Allende
Ukuba umsebenzisi we-Intanethi ucela ukukhangelwa "Isabel Allende ezona ncwadi zibalaseleyo", iziphumo ziya kwalatha kwizona zihloko zithengiswa kakhulu kule minyaka ingamashumi amane idlulileyo. Ngaphandle kwamanani akhe athengisa kakhulu, icandelo elilungileyo lokugxekwa lijongele phantsi umsebenzi walo mbhali waseChile-waseMelika. Nditsho nelona lizwi lingqwabalala limtyhola ngokuba ikopi kaGabriel García Márquez.
Nangona u-Allende ngokwakhe eyamkele impembelelo yobukrelekrele baseColombia, abanye ababhali abaziwayo - umzekelo, uRoberto Bolaño - bambiza ngokuba "ngumbhali olula". Kwimeko nayiphi na into, izimvo zizithoba; amanani, hayi. Ewe, iikopi zakhe ezingama-72 ezithengisiweyo (ziguqulelwe kwiilwimi ezingama-42) zimbeka njengombhali ofundwayo kulwimi lwesiSpanish emhlabeni jikelele
Ubomi buka-Isabel Angélica Allende Llona, ​​ngamagama ambalwa
Isizwe saseChile-American, u-Isabel Allende wazalelwa eLima, ePeru, nge-2 Agasti 1942. Utata wakhe wayengumzala wokuqala kaSalvador Allende (umongameli waseChile phakathi ko-1970 no-1973, de wabhukuqwa nguPinochet). Umbhali wexesha elizayo wafunda kwisikolo samabanga aphantsi kwisikolo saseMelika eLa Paz, eBolivia. Emva koko ndifunda kwiziko labucala lesiNgesi eBeirut, eLebhanon.
Ukusukela emva kwexesha le-50s kude kusekwe ubuzwilakhe basePinochet (ngo-1973), uAllende wayehlala eChile nomyeni wakhe wokuqala, uMiguel Frías. Wayetshatile naye ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwaye wayenabantwana ababini: uPaula (1963 - 1992) kunye noNicolás (1963). Kamva Waya elubhacweni eVenezuela de kwangunyaka we-1988, unyaka awatshata ngawo noWillie Gordon eMelika.
Isabel UAllende usebenze kwimibutho yoluntu ebalulekileyo kunye namajelo eendaba eChile, eVenezuela naseYurophu ngaphambi kokuzinikezela kwakhe kuncwadi. Kwilizwe elisemazantsi wasebenza kuMbutho woKutya nezoLimo weZizwe eziManyeneyo (i-FAO) phakathi ko-1959-65.
Ngokunjalo wayesebenza kwiimagazini Paula y IMampato; Kwakhona, kumajelo omabonakude aseChile. Emva kwexesha, wayengumhleli wephephandaba El Nacional kunye notitshala kwisikolo samabanga aphakamileyo eCaracas. Iincwadi zakhe zokuqala zapapashwa zijolise ebantwaneni, Umakhulu panchita y I-Lauchas, i-lauchones, iigundane kunye neempuku, ukususela ngo-1974.
Indlu yeMimoya (1982)
Inoveli yokuqala, eyokuqala umthengisi ogqibelele -Liphupha legolide laye nawuphi na umbhali-, u-Isabel Allende waphumelela ngalo Indlu yeMimoya. Ezo mpembelelo zohlelo, ubukhulu becala, zibangelwa libali lazo elinyanzelisayo elilayishwe zizinto ze ubunyani bomlingo ngaphezulu kwezizukulwana ezine zosapho lwaseChile. Kungoko ukufana okugxekwa ngabanye abagxeki ngokubhekisele kuko Iminyaka eyikhulu yedwa.
Ke ngoko, kuphuhliso kukho indawo yemixholo enxulumene nothando, ukufa, iinjongo zopolitiko kunye nemicimbi engaphaya kwendalo (iziporho, iingqikelelo, telekinesis ...). Ngaxeshanye, Incwadi ibonakalisa olona tshintsho lubalulekileyo kwezopolitiko nakwezenkolo olwenzeka eChile ngenkulungwane ye-XNUMX.
Amanye amabhaso afunyenwe kule noveli
Inoveli yonyaka (eChile, 1983)
Umbhali woNyaka (eJamani, 1984)
Incwadi yonyaka (eJamani, 1984)
Grand Prix d'Evasion (EFrance, 1984)
Iimbali zikaEva Luna (1989)
Isiza kunye nomxholo
Kwiindawo ezinikezelwe kuncwadi bacebisa ukuba bafunde inoveli kuqala UEva Luna (1987) ngaphambi kokujonga le ncwadi inamabali angama-23 isayinwe ngulo mbhali uyintsomi. Uninzi lwala mabali lube nolwazelelo olukhulu kumdlalo weqonga, unomathotholo kunye nomabonakude. Kwangokunjalo, kwiimpawu zazo zobugqi ziyabonakala, kunjalo kwimeko yabo bakhankanywe ngezantsi:
Ngendlela efanayo, uRolf Carlé - ophambili UEva Luna-Ivela kwibali lokugqibela, Senziwe ngodongwe, Uphuhliso lwayo lukhuthazwa yimeko yokwenyani ka-Omayra Sánchez. Kwelinye icala, uthando namandla omfazi xa bejamelene nobunzima kunye namayelenqe, amele umsonto wokuhlanganisa phantse onke amabali. Ngokufanayo, iyelenqe lokuziphindezela alinakubekelwa bucala.
Iintsomi zikaEva Luna ...
Uluhlu lwamabali agqityiweyo Iimbali zikaEva Luna
"Igolide likaTomás Vargas"
"Ukuba uyichukumisile intliziyo yam"
"Olona ulibeleyo lokulibala"
"Indlela eya emantla"
"Iileta zothando zingcatshiwe"
Umxholo kunye nengxoxo
Yincwadi yenoveli, ekhuthazwa kukugula kukaPaula Frías Allende, intombi ka-Isabel Allende. Incwadi iqala njengentetho epistolary (ileta eyayivela kumbhali isiya kwintombi yakhe) eyalungiswa emva kokuba uPaula ewele isiqaqa kwaye wamkelwa kwiklinikhi eMadrid. Kule ndawo, umama ukhumbula ubomi babazali noomawokhulu bakhe.
Kwakhona, u-Allende ubhekisa kwezinye ze-anecdotes zobuntwana bakhe kunye nokufikisa, kokubini kunye nezinye izalamane. Njengoko isicatshulwa siqhubeka, umama usuka ekuphelelweni lithemba ukuya kurhoxa ... Kancinci kancinci uyamkela ukuba intombi yakhe iyekile ngokwenene ukuba kuloo mzimba uxokayo.
UPaula (wemihla ngemihla)
Ntombi yethamsanqa (1999)
Le ncwadi yincwadi yamabali abaliqela eyimbali eqala kwiminyaka eli-10 (1843 - 1853) kwaye ithatha abalinganiswa bayo ukusuka eValparaíso ukuya eCalifornia. Ingxelo enazo zonke izinto eziqhelekileyo ze- ba thengisi yeAllende. Oko kukuthi, ukuthandana, iimfihlo zosapho, abafazi abomeleleyo nabazimiseleyo, iimeko ezibalaseleyo, ukubonakala okubonakalayo kunye nembuyekezo yabalinganiswa bayo.
Yenzeka eChile (1843-1848). Eli candelo libonisa indlela uEliza- umlinganiswa ophambili womdlalo- owamkelwa ngayo lusapho lakwaSommers kwaye wakhuliswa kwindawo ekumgangatho ophezulu.. Ngokufanayo, ubuntu babazalwana bakaSommers (uJeremy, uJohn noRose) bachaziwe. Phakathi kwabo, uMiss Rose wayengoyena mntu unothando kwaye esondele kuEliza.
Omnye umntu obalulekileyo yayinguMama Fresia, ummi womthonyama waseMapuche owanika uEliza izakhono ezininzi zokupheka. Ngoku, oyitshintshe ngokwenene intombazana yonke yayinguJoaquín Andieta, umfana owayemhle owayesebenzela uJeremy Sommers. Inkwenkwe yoyisa intliziyo kaEliza kwaye yaba sisithandwa sayo.
Kwenzeka phakathi kuka-1848 no-1849. Iqala ngokuhamba kukaJoaquín Andieta ukuya eCarlifonia ukuzama inhlanhla embindini wokubaleka kwegolide. Kungekudala emva koko, uEliza wafumanisa ukuba ukhulelwe kwaye wagqiba kwelokuba amlandele (njengendawo yokubalekela) kwinqanawa yaseDatshi. Kuloo nqanawa uEliza waba ngumhlobo osondeleyo nompheki, uTao Chi'en, owamnceda ukuba amfihle kwaye wamnceda emva kokuphuma kwesisu.
Ukufika kwakhe eCarlifonia, uTao wamisela indlela yokwenza i-acupuncture kwaye wakhawuleza waqalisa ukukhangela umntu amthandayo. Ngeli xesha, eChile, abakwaSommers bothuka kukunyamalala kukaEliza. Ngokukodwa emva kokuba uMiss Rose etyhile: U-Eliza wasisiqhamo sobudlelwane phakathi kukaJohn kunye nomfazi waseChile (ongaziwayo).
U-Eliza wothuka kancinci akuva ukuba inkcazo yomntu osaphula umthetho uJoaquín Murieta yayifana ncam naleyo yesithandwa sakhe. Emva kwexesha, uEliza wadibana nentatheli uJacob Freemont. Wayengenako ukumnceda, kodwa walumkisa usapho lakwaSommers kuEliza (babecinga ukuba uswelekile).
Ngeli xesha, uEliza noTao bahlala eSan Francisco. Kweso sixeko, wazinikela ekuncedeni oonongogo baseTshayina ukuba bakhe ubomi babo kude naloo msebenzi. Ngokuhamba kwexesha, ubudlelwane phakathi kwaba babini baba luthando. Ekugqibeleni, UJoaquín Murieta wabanjwa kwaye wabulawa. Emva koko, xa uEliza ekugqibeleni wakwazi ukuqinisekisa ukuba ngubani lo ungalunganga, waziva ekhululekile ngokupheleleyo.
Intombi yethamsanqa: 168/7 ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ezigqwesileyo nguIsabel Allende
UMegan Maxwell: Iincwadi zakhe eziBalaseleyo
Iincwadi ezi-8 zokubeka incasa emnandi emlonyeni wakho